Buzz, Viral kana Izwi reMuromo Kushambadzira: Ndeupi musiyano? | Martech Zone
Chipiri, April 14, 2015 Muvhuro, April 13, 2015 Douglas Karr
Dave Balter, muvambi we BzzAgent, Inoita basa rakakura kutsanangura mutsauko mu Buzz, Viral uye Izwi reMuromo Kushambadzira mune ino shanduro ye ChangeThis. Heano madimikira ane tsananguro huru dzaDave:
Chii chinonzi Izwi reMuromo Kushambadzira?
Shoko reMouth Marketing (WOMM) ndiyo svikiro rine simba kwazvo papasi. Iko kugoverana chaiko kwemaonero nezve chigadzirwa kana sevhisi pakati pevaviri kana kupfuura vatengi. Izvo zvinoitika kana vanhu vakave vatsigiri vechisikigo. Ndiwo mutsara unoyera wevashambadziri, maCEO nevamabhizimusi, sezvo ichigona kugadzira kana kuputsa chigadzirwa. Kiyi yekubudirira kwayo: yakatendeka uye yakasikwa.
Chii chinonzi Viral Kushambadzira?
Viral Kushambadzira kuyedza kuendesa kushambadzira meseji iyo inopararira nekukurumidza uye exponentially pakati pevatengi. Nhasi, izvi zvinowanzouya nenzira yeemail meseji kana vhidhiyo. Kupesana nekutya kwema alarmist, hutachiona hauna kuipa. Hakusi kusatendeseka kana kusiri kwomuzvarirwo. Pakugona kwayo, ishoko remuromo rakagoneswa, uye pakaipisisa, ingori imwe meseji yekushambadzira inokanganisa.
Chii chinonzi Buzz Kushambadzira?
Buzz Kushambadzira chiitiko kana chiitiko chinogadzira kushambadza, mufaro, uye ruzivo kumutengi. Kazhinji chinhu chinosanganisa wacky, shaya-kudonhedza chiitiko kana ruzivo neakachena chiratidzo, sekutema nyora pahuma yako (kana dhongi rako, sezvakaita NYC kirabhu yehutano nguva pfupi yadarika). Kana buzz ikaitwa nemazvo, vanhu vanonyora nezvayo, saka inozove huru PR mota.
Heino yakasarudzika infographic paIzwi reMuromo Kushambadzira (WOMM) kubva kuLithium:
Tags: buzz kushambadziralithiumhutachiona hwekutengesamukadziWOMMizwi remuromokushambadzira kwemashoko-pamuromo
Jun 17, 2008 na9:41 AM
Kwandiri ini ndinofunga Izwi reMouth inzira yakanaka yekushambadzira, asi zvakare ndinofungidzira inodzokera kune izvo vanhu vari kutaura chaizvo pamusoro pako. Inogona kuva munondo unocheka kumativi maviri. Tora indasitiri yemabhaisikopo semuenzaniso. Ndinoenda kumabhaisikopo apo shamwari dzangu dzinondiudza kuti vaona bhaisikopo uye vakarifarira. Kudivi repafiripi, pandinenge ndichifarira bhaisikopo uye ndikawana mushumo wakashata kubva kushamwari, ndinoita zvakapesana chaizvo.
Ini ndinoshamisika kana izvi zvakanangana mberi nemablogiki uye mawebhusaiti?